Kinneret Serenity- Indlu eNtofontofo - I-Airbnb
Kinneret Serenity- Indlu eNtofontofo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMaayan
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMaayan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndlu ifana nokuzaliseka kwephupha elinombono okhwankqisayo!
Ibekwe ecaleni kwenduli, ke uya kuba nombono omangalisayo woLwandle lwaseGalili kunye neGolan Heights-Eyona ndawo iBONAYO yokuhlala eTibheriya!
Uphononongo luthetha konke :)
*Amagumbi okulala ama-3 (ibhedi ephindwe kabini kwindawo nganye)
* Iibhalkhoni ezi-3
* Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo
* Umbono ovulekileyo (indlu enendawo entle yokujonga kwindawo enzima)
* Kufutshane nendawo yokupaka yasimahla esitratweni
*Inokwamkela iindwendwe ukuya kuthi ga kwi-12 kwaye ilungele izibini
Igumbi leeholide elitofotofo eTibheriya, le ndawo ineYONA ndawo intle eTiberias-iphezu kwenduli kwaye ineendlela ezimbini zomoya, ke ngoko uya kuba nombono omangalisayo woLwandle lwaseGalili kunye neGolan Heights.
Indlu ibekwe phezu kwenduli njengenxalenye ye-complex enezindlu ezininzi, le ndlu ikumgca wokuqala - ophezulu kuzo zonke ezinye izindlu kunye nekona, ngoko ke ukungafani kwale ndlu ngumbono omangalisayo!
kwikona yomgca ophezulu, uya kuba nobumfihlo obungakumbi xa uthelekisa nezinye izindlu, kukho igadi entle kwaye okona kubaluleke kakhulu - ingaba yeyona ikufutshane kwindawo yokupaka (imizuzwana eyi-10 uhamba)! Ke akukho mfuneko yokuba uye kude kakhulu, kwaye kwakhona- akukho mfuneko yokusebenzisa ilifti.
Eli fulethi lahlukile kuba LONA LOKUPHELA kwibhloko enebalcony enye ENKULU kwiibhalkhoni ezi-3 kunye neyadi.
Kwindlu uya kufumana: amagumbi okulala amathathu (ngamnye kukho ibhedi ephindwe kabini) kunye negumbi lokuhlala (kunye nebhedi yokukhupha). Ikhitshi elinezixhobo ezigcweleyo, amagumbi okuhlambela amabini, iWiFi, izifudumezi-moya ezintsha kwigumbi ngalinye, iiTV ezimbini, kukho nomatshini wokuhlamba.
Indlu inkulu ngoko kukho indawo eninzi yeendwendwe ezininzi kunye neentsapho ezinkulu (ukuya kwiindwendwe ezili-12). Nangona le ndlu inkulu, inokusondelelana kwaye ikhululeke kwizibini nazo. Umoya womoya awukholeleki
Indawo yokuhlala ikufutshane kakhulu kwindawo yokupaka (iimitha ezili-10) ngoko awuyi kuba nemithwalo enzima imigama emide ukuba uza nemoto okanye i-cab.
Indawo i-PERFECT - ngaphandle kwento yokuba uya kuba nembono engcono kakhulu eTibheriya ... uya kuba kufuphi kakhulu nombindi wesixeko, isixeko samandulo, i-boardwalk, imarike evulekileyo, iindawo zokutyela kunye nazo zonke iivenkile zokuthenga. :)
Kuya kukuthatha imizuzu emi-5 ukuya kwe-10 ngemoto, kwaye unokufika nalapho ngokuhamba.
Ifana “nenkampu” kwabo bahamba kummandla ongasentla wakwaSirayeli. Ejikeleze ulwandle lwaseGalili unokwenza: Imidlalo yamanzi kunye nokuzonwabisa, ukuya kwimithombo eshushu (KUFANELEKILE), tyelela iKorazim National Park, tyelela i-Yigal Alon Centre, aka "I-Jesus Boat Museum", tyelela i-Daliyot Stream (Majraseh) Reserve kwaye ezininzi ezininzi ...
Ke ukuba ufuna iinkcukacha ezithe chatha, ungalibazisi kwaye uqhagamshelane nam, ndiyafumaneka kwaye ndonwabile yoncedo.
Ixabiso elisisiseko lenzelwe iindwendwe ezi-2, undwendwe ngalunye olongezelelweyo (ngaphaya kweendwendwe ezi-2) yi-26 EUR ngondwendwe, ngobusuku.
4.62 · Izimvo eziyi-481
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi481
Umbuki zindwendwe ngu- Maayan
Ndihlala ndilapha ukuze ndikuncede ngayo nantoni na oyifunayo, ndicela ungalibazisi ukundiqhagamshelana nam ngalo lonke ixesha.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$92
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tiberias